August 6, 2020 7804
श्रीमतिले पनि मिडि’यामा आफुलाइ अर्जु’नले शंका गर्ने कुटपिट गर्ने कमाएको रकम नदिने जस्ता अनेकौ कुराहरु भनेकी थिइन् । आज दुवै जनाको भेट भयो , यो.. संग सम्बन्धित भिडियो हेर्न तल जानु होला ।।
यो पनि पढ्नुहोस् … कुन रुद्राक्षको महत्व कस्तो छ । थाहा पाउनुहोस् ..
भगवान शिवको कृपा पाउन रुद्राक्षको धारण गरिन्छ । शिवको आशुद्धारा उत्पती भएको मानिने रुद्राक्षमा रुद्रको अर्थ शिव र अक्षको अर्थ आशु मानिन्छ ।
भगवान शिवसंग जोडिएको यस पवित्र रुद्राक्ष धारण गर्ने ब्यक्तिको रक्षा स्वयम् भगवान शिलले गर्ने मान्यता रहेको छ । रुद्राक्षको धारणले सम्पुर्ण ग्रहको दोष नास हुने धार्मिक मान्यता छ ।
शिवको आर्शिवाद कृपा दिलाउने रुद्राक्षको अलग अलग प्रकार हुने गर्दछ । यसको मुख अनुसार रुद्राक्षको धारणमा अलग अलग लाभ मिल्ने गर्दछ ।
जान्नुहोस् कति मुख भएको रुद्राक्ष धारण गर्दा कस्तो फल प्राप्त हुन्छ :
एक मु्खे रुद्राक्ष धारण गर्दा सम्पुर्ण पापबाट मुक्ति पाइने तथा सबै कार्यमा सफलता पाउने विश्वास गरिन्छ ।
दुई मुखे रुद्राक्ष
दुई मुखे रुद्राक्ष धारण गर्दा मानसिक शान्ति र व्यापारमा सफलता पाइने विश्वास गरिन्छ ।
तीन मुखे रुद्राक्ष
तीन मुखे रुद्राक्ष धारणले मनुष्यमा आत्मबल बढाउने र धनधान्य बढाउने विश्वास गरिन्छ ।
चार मुखे रुद्राक्ष
चार मुखे रुद्राक्ष मानसिक समस्या, रोग र कष्ट निवारण गर्न धारण गर्नु उपयुक्त मानिन्छ ।
पाँच मुखे रुद्राक्ष
पाँच मुखे रुद्राक्ष यश कीर्ति र सुख बढाउन धारण गरिन्छ ।
छ मुखे रुद्राक्ष
छ मुखे रुद्राक्षको धारण सम्पुर्ण प्रकारका समस्याबाट मुक्ति पाउन र विशेष देवी लक्ष्मीको कृपा पाउन धारण गरिन्छ ।
‘सप्त मुखे रुद्राक्ष’
सात मुखे रुद्राक्ष आयु वृद्धि गर्न अचा’नक आउने कुनै पनि विपतबाट बच्न धारण गरिन्छ ।
अष्ट मुखे रुद्राक्ष
आठ मुखे रुद्राक्ष न्याया’लय सम्बन्धी मामला’मा विजय पाउन धारण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
नौ मुखे रुद्राक्ष
नौ मुखे रुद्राक्ष शत्रु’को नाश गर्न र माता दुर्गाको’ कृपा पाउन धारण गरिन्छ ।
दस मुखे रुद्राक्ष
दश मुखे रुद्राक्ष भूतप्रेत, बा:धा र दुर्घ:टना लगायतका घटनाबाट बच्न धारण गरिन्छ ।
एघार मुखे रुद्राक्ष
एघार मुखे रु’द्राक्ष समा:जमा प्रतिष्ठा र सम्मा:न दिलाउन धारण गरिन्छ ।
बाह्र मुखे रुद्राक्ष
बाह्र मुखे रुद्राक्ष सम्पुर्ण मानसिक समस्या, अशान्ति एवम् दरीद्रता नास गर्न धारण गरिन्छ ।
तेह्र मुखे रुद्राक्ष
तेह्र मुखे रुद्राक्ष सम्पुर्ण प्रकारका मनोका’मना पुरा गर्न धारण गरिन्छ ।
चौध मुखे रुद्राक्ष
चौध मुखे रुद्राक्ष आत्म र शारी’रिक बल वृद्धिका लागी धारण गरिन्छ ।
गौरी शंकर रुद्राक्ष वैवाहि’क जीवनलाई सुख’मय बनाउन धारण गरिन्छ ।
गणेश रुद्राक्ष सम्पुर्ण बाधा ना’स गर्न र सुख सम्वृ’द्धि प्राप्त गर्न धारण गरिन्छ ।
Prevबच्चाहरुले भने हामीलाई पुष्पा ममिनै प्यारो, हामी उँहासँगै बस्न चाहन्छौं (भिडियो सहित)
Nextश्रीमती सँग अर्जुनको भयो भेट, भेटमा पर्यो यस्तो चर्का’चर्की (भिडियो सहित)
बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ? हेर्नुहोस्…
हे भगवान! म कस्तो अभागी रहेछु, आफ्नै बिहेमा बहिनिलाई गु’माए…